Mampalahelo ny antontan'isa: ny vehivavy sy ny tovovavy ao India tambajotra, ny vehivavy tambajotra, ny vehivavy ny
Fitoviana sy ny fampandrosoana»ny Banky iraisam-pirenena milaza fa nandritra ny roa nandritra ny taonjato maro, isan-taona ny ankizivavy sasany no namoy ny ainy noho ny lahy sy ny vavy. Ny halehiben’ny herisetra atao amin’ny vehivavy zazarano sy ny zaza dia mampiseho fotsiny ny fomba nanambara ny fitsarana an-tendrony manohitra ny vehivavy, ary nahoana ny vehivavy fotsiny dia afaka sary an-tsaina, raha India mandeha ao, ary ny fiovana. Amin’ny herinandro ho avy tsy ho maro ny fifanakalozan-kevitra eo India indrindra lahy mpanao politika momba ny lohahevitra Fiarovana. Saingy zara raha misy dia anontanio na ny firenena iray dia azo antoka, raha ny antsasaky ny olom-pirenena miaina ao mampitombo ny tahotra, tsy hoe satria noho ny fandrahonana ataon’ny mpampihorohoro na ny miaramila fahavalo, fa ny fiaraha-monina izay izy no teraka. India toa manadino fa ny fiarovana ny olona dia tsy maintsy ampidirina ao koa ny fiarovana ho an’ny isan-jato ny vehivavy mponina. India dia tsy maintsy maika ny famahana ny fandrahonana ity vahoaka ity vondrona, miainga avy amin’ny fanavakavahana, ny herisetra. Fanampin ny tonian-dahatsoratra: Ny voalaza etsy ambony ny maro raha ny marina dia manondro ny miaina-teraka zazavavy. Fa ny herisetra atao amin’ny vehivavy ny maha-lahy sy vavy ao India manomboka na dia talohan’ny nahaterahana. Tany am-boalohany, izany dia nihevitra fa ny iray Tapitrisa fifantenana raharaha zazarano isan-taona. Fa ny zaza any amboaka ny teknolojia mbola ho fandrosoana, sy ny toetry ny kanto ultrasonic fitaovana dia nanjary miely patrana any India. Vao haingana vinavina mandeha avy — Tapitrisa mifantina ny fanalan-jaza ny vehivavy foetus isan-taona. Any amin’ireo firenena izay misy ny fiainana an-tany ny zazakely sy ny ankizy ihany ny voajanahary maso, mba tsy ho faty ao ny zazavavy noho ny zazalahy. Fa ny fahatelo fanadihadiana Nasionaly fianakaviana fahasalamana (NFHS) dia nanambara fa ny Lahatsoratra dia zaza ny fiainana an-tany ny tahan’ny ho an’ny Indiana ankizivavy, raha oharina amin’ny zazalahy. Ao amin’ny taona vondrona iray efa-taona, ny ankizy ny fiainana an-tany ny tahan’ny ho an’ny zazavavy dia ambony kokoa noho ny an’ny ankizilahy, izay tsy ao. Ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena heverina fa India very irery any ny hafa ny zazavavy. Tarehimarika ireo dia fahafaham-baraka amin’ny fiaraha-monina Indiana. Io paika vono olona ihany no afaka hitranga, satria ny fiaraha-monina manaiky izany sy ny governemanta mivadika ny sofina marenina sy jamba. §§ Indiana fehezan-dalàna famaizana hametraka sazy ho an’ny niniana Mahatonga ny fahafahan-jaza, fahaterahana Nandratra ao am-bohoka ny ankizy, fisorohana ny nahaterahan ny zaza, na ny Hiteraka ny maty taorian’ny nahaterahany, ary koa ho Fanehoana ny zaza latsaky ny taona. Inona araka ny hevitrao, firy ny heloka bevava ny fanenjehana ara-pitsarana tokony ho tao anatin’ny taona vitsy, eo amin’ny fototry ny lalàna ireo. Izany dia tsy maintsy ho ny iray tapitrisa. Ny haavon’ny ny herisetra atao ny tovovavy toy ny foetus sy ny zaza dia mampiseho ny fomba lalina ao India ny fitongilanana manohitra ny vehivavy no nipetraka, ary nahoana ny vehivavy ihany ho antoka, raha India amin’ny maha-Firenena dia hita miharihary sy ny fiovana. Izany dia tsy atao, na dia ny fanisam-bahoaka dia nampiseho fa ny ohatry ny vavy-taona dia nilatsaka nanomboka tamin’ny fanisam-bahoaka ao Etazonia. An-tapitrisany ny ankizivavy, ny fiainana no zara raha mihoatra nikolokolo sy nahita fianarana noho ny rahalahy. Ny Firenena Mikambana misahana ny Fampandrosoana ny tatitry ny kajy fa ny Indiana ankizy mijaly noho ny tsy fahampian-tsakafo (raha ampitahaina amin’ny Shina). Ny fahatelo fanadihadiana Nasionaly fianakavianao ny fahasalamana dia nanambara fa rehefa ny reny no tsy ampy sakafo, ny ankizy dia stunted sy ny maty. Ny fampianarana bebe kokoa ny reny, ny ambany ny mety ho izay ny ankizy dia fandaniam-miala na ho faty. Amoron-dalana, ny fomba ny fiaraha-monina Indiana treats ankizivavy kely, raiketo ireo rahalahiny, fa ny zavatra ilainy — maha-lahy — manana ny safidiny ny ireo ny rahavavy. Ny zavatra tonga avy izany dia ny socialisation ny herisetra atao amin’ny vehivavy. Tsy misy vinavina ny halehiben’ny herisetra ara-batana manohitra ny ankizivavy mbola kely, fa izany no soa aman-tsara ny mieritreritra fa izany dia be. ny Indiana Minisitera misahana ny vehivavy sy ny ankizy fampandrosoana namoaka Pirenena fianarana amin’ny fanararaotana ny ankizy, dia mampiseho fa ny ankizy nanaovana fanadihadiana nijaly iray na mihoatra ny endrika fanararaotana ara-nofo. Mety ho mampidi-doza, io voafetra fianarana milaza fa mihoatra ny antsasaky ny Indiana ankizy mijaly noho ny fanararaotana ara-nofo, nefa izany dia mazava be miely patrana kokoa noho andrasana. Izany dia mahakasika izany indrindra ireo voakasika ny ankizy dia nitatitra fa ny Fanafihana tamin ny olona fantatr’izy ireo, matetika ny havany akaiky. Tahirin-kevitra avy amin’ny National Firaketana momba ny Heloka bevava ny Tompon’andraikitry (NCRB) dia manamafy fa ity fomba mitohy, raha ny ankizivavy no vehivavy. Ao ny taona, dia nisy voasoratra ara-panjakana ny tranga Fanolanana. Ao amin’ny toe-javatra ny niharam-boina nahafantatra ny mpanao ratsy — ny lojika no vokany fa ny ankizilahy hitombo ny Mino fa ny vehivavy ihany no misy mba hanomezana fahafaham-po ny zavatra ilain’ny olona. Satria ny NCRB ihany no afaka misoratra anarana nitatitra ny toe-javatra, ny nomena ny tahirin-kevitra ihany ny vaingan-dranomandry ny heloka bevava ity. Ny fiaraha-monina Indiana dia mahatohitra ny fiovana. Ny NFHS nahita fa ny eo ho eo ny fampakaram-bady taona dia mbola fotsiny momba ny taona sy mahita izany ho toy ny famantarana ny ambany dia ambany ny satan’ny vehivavy. Ankoatra izany, raha ny marina izany dia mitarika ho amin’ny fanalefahana ny vehivavy sy hampitombo ny mety ho ratsy Vokatry ny amin’ny fandikana sy ny fahasalamana. Tsy ampy antontan-kevitra, mba hanaporofoana ny fomba hanimba ireo. Ny vehivavy, indrindra fa ny vehivavy mahantra any India, no tandindonin-doza ho an’ny miteraka tena. Araka ny andian-omd (tanjona fampandrosoana) no teraka, ny reny sy ny zaza amin’ny fiainana an-tany ny tahan’ny ho an’ny velona. Izany dia tokony ho nihena ny.
Hatreto, India efa nihena ny reny ny tahan’ny ho velona ny zaza teraka. Ao tapitrisa velona ny zaza teraka any India isan-taona, ny vehivavy maty, fara fahakeliny mandritra ny fiterahana. Ny fiaraha-monina Indiana dia matetika no tsinontsinoavina ihany koa ny mifandray amin’ny olana hafa. Na dia eo ambanin’ny Indira Awad ny Bojana, ny didy navoaka izay rehetra vao nanorina trano dia tsy maintsy manana trano fidiovana, raha ny tena izy, tena vitsy ny trano, manana trano fidiovana. Ny mila manao ny zavatra ilaina any An-tokotany, toa mba ho ara-bakiteny ny fanasana ny fanolanana. Ny fitarainana-Pirenena Vaomieran’ny mpiaro ny zon’olombelona mba hampiseho ny fomba maro ny vehivavy an-keriny sy naolana, raha mandeha amin’ny alina tany an-tsaha. Any amin’ny firenena maro ny tovovavy no tsy mety eo amin’ny Tanora, mba hitsidika ny sekoly na ho raisina araka ny ray aman-dreny avy ao amin’ny sekoly, satria ny trano sekoly tsy manana trano fidiovana. Toy izany koa ny zo ny fanabeazana mijaly. Mampalahelo izany, fa izany no andrasana fa ny vehivavy Indiana, ny Finoana dia niteraka fitiavan-javatra fa ny fiarovana ny niankina tamin’ny ny olona hibaiko azy ireo ho toy ny fahalalam-pomba. Ny NFHS nampiseho fa ny manambady vehivavy no iharan’ny herisetra eo amin’ny fanambadiana. Izany dia mampiseho ihany koa, fa ny vehivavy no resahina dia mahita izany azo ekena fa misy lehilahy mamono ny vadiny raha toa izy ka mivoaka tsy misy mahalala azy, miaraka aminy milaza fa ny firaisana no nandà, ny ankizy tsinontsinona, tsy ara-drariny masaka, ny fanitsakitsaham-bady dia ahiana na ny fianakaviany ny vadiny dia tsy misy fanajana. Ny teny notsongaina avy ny tatitra:»Izany no azo inoana kokoa fa ny herisetra dia heverina ho hamarinina raha ny voalaza ny fitondran-tena mandika ny inona no heverina ho azo ekena ny fitondran-tena ho an’ny vehivavy tao amin’ny anjara asan’ny lahy sy ny vavy ho toy ny vadiny, ny reniny, sy ny zanany vavy-in-lalàna.»Ary avy eo ny mazava misy kokoa ny asan’ny mpanao heloka bevava ny herisetra atao amin’ny vehivavy. Any India, dia misy be ny olana amin’ny fanondranana olona sy ny manokana manoloana ny vehivavy any amin’ny faritra misy fifanolanana. Avivas sy ny vehivavy ho toy ny mpamosavy, notombohina tamin’ny vy. Toy ny teo aloha, dia misy ny zava-doza toy ny terena hanambady, ankizivavy maty, satria izy ireo hanambady ny zazalahy ny safidy, na tsy ampy ny dot mba hitondra, na ny tsy ilaina hysterectomies (fandidiana fanesorana ny tranonjaza) eo ambany ny fiantohana ara-pahasalamana rafitra. Ao amin’ny fiaraha-monina, ary koa eo amin’ny Firenena, dia mifototra amin’ny fiarovana. Ny Marefo indrindra dia ireo izay kely indrindra azo antoka. Ny vehivavy any India, dia tsy atahorana soa aman-tsara, satria ao amin’io Fanjakan-dehilahy ny fiaraha-monina amin Andriamanitra ao manadino ny ankizy. Noho izany, ao India ny vehivavy dia azo antoka, dia tsy maintsy manova ny firenena — misy bebe kokoa ny vehivavy dia tokony hipetraka ao amin’ny Antenimiera sy ao amin’ny toerana ara-politika sy ny Mpanatanteraka ny maha-zava-dehibe. Ny safidy tsirairay dia mitondra miaraka aminy ny fanantenana vaovao-piandohana.
Fa India dia tsy manova
Mety tsy ho azo antoka, aza ary tsy manaja ny lasa, raha mbola ny demokrasia izay tena mirehareha ho mitarika ny ilaina maika fototra fiovana eo amin’ny fiainany ny vehivavy. Satyagraha Pal, ny mpanoratra ny eto an-kalalahana voadika amin’ny lahatsoratra tany am-boalohany dia mpikambana taloha tao amin’ny Komisiona Nasionaly misahana ny zon’olombelona. Izany dia nandritra ny fotoana fohy voalaza amin’ny Ankapobeny ny fahatakarana fa araka ny fampidirana ny vaovao ny rafitra fiantohana ho an’ny fianakaviana ao anatin’ny fahantrana, ny isan’ny nanao hysterectomies hitombo be. Angamba ny sasany ny vehivavy dia afaka manam-bola amin’ny alalan’ny aretina, ny fandidiana, tampoka. Ny Fitomboan’ny na izany aza, dia tena henjana fa izany no heverina, dia ho ratsy atao, ny trano ny eo ambanin’ny RSBY ambony indrindra vonoina sy malemy paika tsy amin’antony. Noho izany fiteny izany, fa maro ny voa vehivavy latsaky ny taona. fanontaniana ireo nanomboka. Izany dia mety tsy ho tena nanala ny, izay asa ilaina. Fa ny toe-javatra no tsy voadinika ao izay ny fidirana an-tsehatra»nanana afa-tsy naka toerana ao amin’ny taratasy». Vao haingana ny tatitra momba ny tsy ilaina miasa hysterectomies. Nahoana ny vehivavy Indiana, Rita Banerjee, mpanorina ny»iray Tapitrisa ny fahadisoana»ny fampielezan-kevitra, ny famonoana olona faobe tao India ny vehivavy sy ny zazavavy mba ho antsoina hoe fandripahana, ary izao tontolo izao miady ho an, fa izany koa dia ekena ho toy izany ary voasazy, izy no manazava ao amin’ny lahatsorany»ny Antony nahatonga ny faharavan’ ny Indiana, ny vehivavy dia tokony ho hita ho toy ny fandripahana (ny fandripahana).»Afaka manohana ny ady amin’ny fanoherana ny fandripaham-bahoaka ao India, ohatra, ny fanaovan-tsonia ny fampielezan-kevitra famantarana sy ny Facebook pejy ny fampielezan-kevitra toy izany
← Ny Lehibe Indiana Fanambadiana Namboarina Saga: Tovovavy tsara Tarehy hihaona Tanora Achievers
Ankizivavy Daty ho maimaim-Poana (Zazavavy Daty maimaim-Poana) →